Wal-dhibdee Gadaa Meelbaa: Dhibdeen Gadaa Meelbaa keessa ture furameera - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Goobana Siidaa/Facebook
Waldhibdeen miseensota Gadaa Meelbaa gidduutti uumamee ture guyyaa kaleessaa magaalaa Bishooftuutti araaraan furameera.
Gadaan Meelbaa Oromoo Tuulama biratti luba amma aangoorra jiruudha.
Rakkoon kun wayita warri Gadaan Meelbaa baallii fuuchuuf qophaa'an sirna godaansaa caffee Odaa Nabeetti geggeeffamerraa eegale.
Gareen wolqooduutu ture jedha yeroo hedduuf garee kanneen walitti araarsuuf hojjechaa turuusaa kan himuu Foollee fi Hoogganaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu dargaggoo Goobana Siidaa.
Duraan Abbaa Gadaa kan turan Bayyanaa Sambatoo fi warra baallii fudhatan gidduus baallii kennuurratti wal-dhibdeen tureera jedha.
Gadaa Meelbaa jidduutti maaltu ta'e?
Waggoota arfan darban gumii abbootii gadaa fi gadaa Tuulamaa waliin hojjechaa turuusaa kan himu dargaggoo Goobana Siidaa, dhibdee ture furuuf baay'ee ifaajeera jedha.
Duudhaa Gadaa keessa jiru sirriitti beekuu dhabuu fi qaamni siyaasaa Gadaa keessa harka galfachuun rakkoo nama qaanessu akkanaa keessa akka seenamu sababa ta'eera jedha dargaggoon kun.
Rakkoon Gadaa Tuulamaa kan eegale wayita baallii walharkaa fuuchuuf godaansi Odaa Nabeetti taasifameedha jedha Goobanaan.
''A.L.I 2009 godaansa gadaarratti rakkootu ture. Mari'atanii walii hin galle. Jilli nagaa qabu hin taa'amne."
"Gadaa fudhachuuf kan dhiyaatan garee hedduutu turan. Sababa kanaan duraan Abbaa Gadaa kan turan Bayyanaa Sambatoo fi Salgiiwwan Meelbaa gidduutti walitti bu'iinsi uumame," jedha.
Haata'u malee wayita sana araaramanii jila godhatanii baallii walitti dabarsanis sirna guutuu hin raawwanne jedha dargaggoon kun.
Eeguma Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa Obbo Bayyanaa Sambatoo irraa baallii fudhateellee Meelbaa keessa gareen walqooduun akka ture dubbata.
Rakkoo kana "abbootii Gadaa Oromiyaa keessa jiran hunda waammannee, qeerroo fi qarree hunda waliin taanee bakka Pirezidaantiin Naannoo Oromiyaa jiranitti guyyaa kaleessaa araara buusneerra'' jedhe.
Araarri kan bu'e Gadaa Meelbaa keessatti garee walqoodee gidduutti qofa osoo hin taane gadaa duraanii kan baallii Meelbaatti dabarsee fi Meelbaa gidduuttis nagaan bu'eera jedha.
Araara kanarratti akka argamaniif affeeramuusaanii kan himan Abbaan Gadaa duraanii Bayyanaa Sambatoo ''dhimmaaf gara biraa waanan tureef argamuu hin dandeenye. Garuu sirna guddaa fuula keenya duraa waan qabnuuf jennee araara buusneerra" jedhan.
"Irreechi nagaadha, irreechi qulqulluudha, kanaafuu irreecha keenya haala bareedinaan irreeffachuuf araara buusuun dirqama jennee itti amanneeti'' jedhan.
Gumiin tokkummaa abbootii Gadaa lafa isaan hin jirretti Gamtaa abbootii Gadaatti jijjiiramuu komataa kan turan Bayyanaa Sambatoo "gadaan kabaja waan ta'eef ulfina gadaaf jecha waan hunda ni goona" jedhan.
Kanaan dura waan seerri hiikuu dadhabellee gaaddisa gadaatti furmaata argataa akka ture beekna kan jedhu Dargaggoo Goobana Siidaa dhibdeen gaaddisa gadaatti hin furamne hin jiru jedha.
"Oromoon Gadaan bulu yoo wal lole gaaddisaan walga'ata. Duudhaan bade kun iddootti debi'uu qaba.''
Hanqinni beekumsa gadaa fi sirni gadaa mataansaa hundee cimaa jabeeffachuu dhabuunsaa rakkooleen akkanaa akkaa mudataniif sababa jedha.
Namoonni waa'ee gadaa irratti hubanoo fooyya'aa qaban warra gadaa hoogganaa jiran cinaa dhaabbachuun tumsuu qabus jedha Goobanaan.